आमाबाबुको खातामा रकम जम्मा गर्न निर्देशन, नगरे के हुनेछ कारबाही ? « Deshko News
आमाबाबुको खातामा रकम जम्मा गर्न निर्देशन, नगरे के हुनेछ कारबाही ?
महिला तथा सामाजिक समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा समस्या देखेमा निजका सन्तान वा नजिकको हकवालाको आर्थिक आम्दानी वा हैसियत वा उपार्जनका अवस्था पहिचान गरी निश्चित रकम मासिक रूपमा सम्बन्धित ज्येष्ठ नागरिकको खातामा जम्मा गर्न लगाउनुपर्ने छ । तर, तोकिएको न्यूनतम आम्दानी नभएका व्यक्तिको हकमा भने ज्येष्ठ नागरिकको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नु स्थानीय तहको दायित्व हुने छ ।”
पारित प्रतिवेदनअनुसार आमाबाबु सगोलमा रहेको वा कानुनबमोजिम छुट्टिएको अवस्थामा समेत रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ । सगोलमा रहेको अवस्थामा संयुक्त खातामा उक्त रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ । फरक फरक बसेको अवस्थामा हेरचाह गर्नुपर्ने बाबु वा आमाको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ ।
स्थानीय तहको निर्देशनअनुसार सन्तान वा हकवालाले रकम जम्मा नगरेमा स्थानीय तहमा निवेदन दिन सकिने छ । सन्तान वा हकवाला कार्यरत निकायमा पनि निवेदन दिनसक्ने विकल्प विधेयकले खुला गरेको छ । खोरखापत्रमा खबर छ ।